Ndiri mukadzi ane makore 33 | Kwayedza
Ndiri mukadzi ane makore 33
09 Jun, 2014 - 15:06	 2014-06-09T15:37:51+00:00 2014-06-09T15:36:51+00:00 0 Views
KUNE vose vaimbofona pa0713 799 609 ndinokutendai chiregedzai henyu kufona ndakamuwana wandaida chaiye. Ndinokutendai vabiki vechirongwa ichi, wenyu wekuMasvingo netara. Ndatenda hangu.
Makadii? Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handisati ndamuwana chaiye wandiri kuda. Ndiri mudzimai ane makore 33 nevana vaviri, ndiri positive uye ndinoda shamwarirume iri pachokwadi ine makore 35 kusvika 40. Ndibatei pa0738 833 130.
Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana vatatu uye ndinotsvaka murume ane makore 40 kusvika 50 asingadhakwe kana kuputa fodya. Anoshanda ngaandibate pa0715 176 694.
Ndiri murume ane makore 31 ndiri kutsvagawo shamwarikadzi ine makore 29 kusvika 33. Anoda ngaandibatewo pa0715 015 022.
Makadii veTishamwaridze? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana 2 ndinozvishandira uye ndinonamata chechi yepositori. Ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye akavimbika anonamata, anoshanda asi vanosvuta fodya nekudhakwa kwete. Nhamba dzangu 0715 940 397.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana 2 ndinotsvagawo murume akatendeka ari pachokwadi nemba. Ngaandibate pa0774 290 853.
Ndiri mukadzi ane makore 34, HIV positive uye ndinotsvakawo murume ari pachokwadi akaita seni. Ngaandibate pa0771 325 024.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotarisira musikana 24 zvichidzika asina mwana nechirwere anotaura chokwadi, achinamata. Ndibatei pa0779 827 938.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvaga musikana ari pachokwadi chekuda imba ane makore 20 kusvika 25. Nhare dzangu 0737 812 318 asi vemiedzo kwete.
Makadini veKwayedza? Makaita basa ndakamuwana wandaida saka vose vaifona pa0716 252 899 chiregai zvenyu.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana mumwe ndiri kutsvagawo murume asina mukadzi anoda zvemba. Nhamba dzangu idzi 0717 290 659.
Ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 24 asina hurwere uye akashambidzika. Anenge andifarira ndibatei pa0776 821 771 kana paWhatsApp.
Ini ndiri musikana ane makore 31 handisati ndamboroorwa, ndinotsvagawo mukomana wekunzwisisana naye ari pachokwadi ane makore 32 kusvika 37 chete. Ndibatei pa0716 312 264.
Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo shamwarisikana ine makore 18 kusvika 21 akavimbika, anoda Mwari uye ari HIV negative. Nhamba dzangu 0774 620 479.
Ndinofara nechirongwa cheTishamwaridzane, ndiri murume ane makore 34 ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 23 kusvika 26. Ndine mwana mumwe, nhare dzangu 0716 367 850.
Ndiri mukomana ane makore 31 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 25 asina chirwere ari pachokwadi, anotya Mwari. Nhare dzangu 0778 791 959.
Ndiri mukomana ane makore 19 akavimbika ndinotsvagawo musikana munaku akavimbika ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 20. Anondida anondibata pa0771 348 812.
Ini ndiri mukadzi ane makore 33 ndiri kutsvaga murume wekuwadzana naye anoda zvekuroora, handina mwana. Vanoda ndibatei pa0739 397 802.
Ndiri mukomana ane makore makumi matatu nerimwe ndinotsvagawo musikana ane makore ari pasi peangu ari pachokwadi. Asina chirwere ngaafone panhamba 0778 791 959.
Ndiri murume ane makore 43 nevana 5 pamwe nemukadzi, ndiri kudawo mukadzi wokuroora ari pachokwadi anoda barika. Akazvipira ngaandibate pa0773 006 956.
Ndiri mukadzi ane makore 42 nevana vatatu ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Handina chirwere saka ndinodawo asina chirwere aine rudo. Ndibatei pa0775 746 997.
Ini ndinonzi Susan Sibanda ndine makore 45 nevana vaviri uye ndiri kutsvaga murume ane makore 48 zvichikwira ari positive. Nhare dzangu 0772 113 937.
Ndine makore 23 uye ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 23, anoda nezvangu ngaandibate pa0782 006 963.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndiri kudawo musikana wekuroora anoda zvekugara kumusha mumwaka wekurima. Ndibatei pa0716 065 996.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndiri kutsvagawo musikana akavimbika anonamata ane makore 18-26. Ndiri musoja, nhare dzangu 0774 241 403.
Ndiri murume ane makore 36 uye ndiri kutsvaga mukadzi wekuwanana naye akavimbika anonamata ane makore 36 zvichidzika. Ndine munda kuminda mirefu kuMarondera, anondida anondibata pa0771 926 382. Ndatenda hangu.
Ini ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika 27 kunyangwe ane mwana mumwe ndinomuda. Ndinoshanda, anoda ngaandibate pa0714 579 033, vemanyepo chimbomira nekuti yenyu nguva ichakwanawo yechokwadi.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 44 nevana vatatu ndiri kutarisira kuwanawo murume ane makore 45 kusvika 50. Vanoda ndibatei pa0772 254 776 asi varume vevaridzi kwete.
Ndiri mudzimai ane makore 55 nevana 3 uye ndinotsvakawo shamwarirume yakavimbika ine makore 50 zvichikwira. Ndinonzi Sharai, vanoda ndibatei pa0783 174 499.
Makadini zvenyu veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 33 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ane makore 36 kusvika 48 anoda zvemba uye anotya Mwari. Ndibatei pa0779 769 540.
Makadii ? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 2 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi chekuda kuwana kwete kutamba vanoda zvekutamba ibvai marega henyu kufona. Nhamba dzangu 0733 886 879.
Ini ndiri murume ane makore 27 nemwana mumwe chete ndiri kutsvaka musikana ane makore 18 kusvika 19 anotya Mwari. Anenge andifarira nhamba dzangu idzi 0771 489 765.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nemwana 1 ndiri HIV positive uye ndinotsvaga murume ane makore 40 kusvika 50. Vanoda ndibatei pa0738 461 148.
Ndiri mukadzi ane makore 41, HIV positive uye ndiri kudawo murume ari zvandiri ane makore 43-50 ari pachokwadi. Fonai pa0779 132 605, ndinoda anonamata.
Ini ndiri mukadzi ane makore 27 nemwana mumwe ndinoda murume akavimbika ane mwana wake uye anofarira zvemusha. Anondifarira ndibate pa0771 922 780.
Ini ndiri mukadzi ane makore 42 ndinotsvagawo shamwari yechirume. Handina chirwere, zita ndinonzi Rudo. Nhamba dzangu 0783 213 286.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Ndiri muHarare, ndibatei paWhatsApp pa0783 171 622.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndiri kutsvakawo musikana anoda kuroorwa ari pachokwadi anoda zvemba. Zita ndinonzi Takunda Chinoera, vanoda ndibatei pa0713 681 341.
Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1 ndinodawo murume ari pachokwadi anogeza anoshanda uye ane pfungwa dzakakwana ane makore 25-35. Vanoda zvekutamba musafone zvenyu. Nhamba dzangu 0777 896 782.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichikwira. Anoda ngaandibate pa0714 380 330.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndiri kutsvaga musikana wekuroora, ndibatei pa0773 786 914.
Ndiri mukadzi ane makore 43 ndiri kutsvagawo shamwari yechirume ine makore anotangira pa43 kusvika 45. Nhamba dzangu 0739 111 283.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 2, ndine shopu kumusha uye ndinonamata chechi yepositori. Ndinodawo murume ane basa rake anonamata chechi yepositori ane makore 35 zvichikwira anoda zvekuongororwa ropa. Anoda ngaandibate pa0715 940 397.